ပြားရညျဝယျထားရငျ ဖတျထားနျော - Latest Myanmar News
June 10, 2021 by Latest Myanmar News
ပြားရညျမရှိသော ကမ်ဘာမှာ လူသားတှသေကျတမျး ကလညျး (၄) နှဈထကျ မပိုနိုငျကွောငျး ကမ်ဘာကြျော ဂြာမနျလူမြိုး အတှေးအချေါပညာရှငျတဈဦးဖွဈသူ Mr.Albert Einstein က မိနျ့ဆိုထားပါတယျ။ မှနျ ပါတယျ။ ဒီကမ်ဘာမွပေျေါတှငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ အညီ ညှတျဆုံး အစားအစာမြားထဲမှာ “ပြားရညျ” လညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈတယျ ဆိုတာကို လူတိုငျးသိထား ကွပွီးဖွဈပါတယျ။
သို့သျော ၄ငျးပြားရညျကို ရနှေေးဖွူ ဖွငျ့ရောသောကျခွငျးက ဘယျလိုကနျြးမာ ရေးအာနိသငျတှေ ရရှိနိုငျသလဲဆိုတာကိုတော့ သိသူတော့ နညျးပါးပါလိမျ့မယျ။
သောကျသုံးရမညျ့ ဆေးညှနျးပုံစံ က ဒီလိုပါ။ ကွကျသီးမှေးညငျးခနျ့ပူသော ရနှေေးဖွူ တဈဖနျခှကျ နှငျ့ ပြားရညျစဈစဈ တဈဇှနျး (လကျဘကျရညျဇှနျးအရှယျ) လိုအပျပါတယျ။
၄ငျးတို့ကို ရောသမ သှားအောငျ ဇှနျးဖွငျ့ နာနာမှပေေးပါ။ ၄ငျးဖြျောရညျကို သောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ အောကျပါကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ရရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
(က) အဆုတျထဲရှိ အရိအရှဲတှကေို သနျ့စငျပေးပါတယျ။
(ခ) ကိုယျခံစှမျးအားကို တိုးတကျမွငျ့မားလာပွီး ခြောငျးဆိုး၊ ရငျကပျြနာ၊ အသကျရှုလပွှေနျပှ ရောဂါ၊ အအေးမိရောဂါ တို့ကို ကောငျးစှာ ကုသပေးနိုငျပါတယျ။
(ဂ) အစာခလြေမျးကွောငျးမှာ သှေးထှကျခွငျးမှ ကာကှယျပေးရုံသာမက၊ ထိုအစာခလြေမျးကွောငျးပျေါရှိ ကပျပါးပိုးမြားကိုလညျး သနျ့စငျပေးပါတယျ။
(ဃ) ဤဆေးဖြျောရညျသောကျစမှာ ဗိုကျတှခေါးတှေ ဖောငျးလာကောငျး ဖောငျးလာနိုငျပါတယျ။ သို့သျော မစိုးရိမျပါနှငျ့ ဆကျ လကျ၍သောကျပေးပါ ဤဆေးရညျက မစငျအိမျကို ဖောငျးကွှစခွေငျးအားဖွငျ့ ပြော့နူးစပွေီး နောကျဆုံးမှာ ၀မျးနဲ့လအေဖွဈ သကျဆငျး စပေါတယျ။
(င) အူသိမျ၊ အူမမြားအားလုံးကို ကောငျးစှာအလုပျလုပျစပွေီး အဆိပျအတောကျပွေ စပေါတယျ။ (စ) အစှမျးထကျမွကျတဲ့ မှိုသတျဆေးရညျ၊ ပိုးသတျဆေးရညျ၊ ဗကျတီးရီးယားသတျ ဆေးရညျအဖွဈ စှမျးဆောငျနိုငျပါတယျ။
(ဆ) ညဘကျ ယမကာ အလှနျအကြှံသောကျသုံးခဲ့သူမြားဟာ နံကျအိပျယာထမှာ ပြားရညျဆေးဖြျောရညျကို သောကျသုံးပေးခွငျး ဖွငျ့ ခေါငျးမကွညျ ခေါငျးကိုကျ ဗိုကျအောငျ့ဝဒေနာတှေ မခံစားရတော့ပါဘူး။
(ဇ) ပြားရညျဟာ ကြောကျကပျထဲရှိ အရညျမြားကို စုပျယူပဈတာကွောငျ့ ညဘကျမကွာခဏ ဆီးထသှားခွငျးကို ထိနျးခြုပျပေးနိုငျ စှမျးရညျရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ညဘကျ ဆီးခဏခဏသှားသူမြားအဖို့ ထိုဆေးဖြျောရညျကို ညနခေငျးပိုငျးမှာ သောကျပေးခွငျး ဖွငျ့ ကြောကျကပျကို သိသိသာသာကောငျးကြိုး ပွုပါတယျ။
ပြားရညျသောကျရနျ အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျ ဟာ ဘယျအခြိနျ ဖွဈသငျ့တယျလို့ သငျ ထငျပါသလဲ ?
နံနကျစောစောအိပျယာထခြိနျဖွဈတဲ့ ၀မျးဗိုကျထဲမှာ ဘာအစာမြှမရှိတဲ့အခြိနျဟာ ပြားရညျသောကျရနျ အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျဘဲ ဖွဈပါတယျ (သို့မဟုတျ) အစာနဲ့ဝေးခြိနျဖွဈတဲ့ ညနခေငျးပိုငျး (ညစာမစားခငျ နှဈနာရီခနျ့အလို)မှာလညျး သောကျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နံနကျအိပျယာထ (သို့မဟုတျ) ညနခေငျးပိုငျး ဖွဈတဲ့ မိမိအတှကျပို၍ အဆငျပွနေိုငျမညျ့ အခြိနျကိုရှေး၍ တဈနလြေှ့ငျ တဈကွိမျကနြှုနျးဖွငျ့ ပြားရညျနဲ့ရနှေေး ဖြျောရညျကို အထကျဖျောပွပါဆေးညှနျးအတိုငျးသောကျပေးရမှာပါ။
၄ငျးဖြျောရညျကို အကွာကွီး အအေးခံမထားသငျ့ဘဲ ခကျြခငျြးသောကျပေး သငျ့ပါပတေယျ။
ဤကဲ့သို့ ပြားရညျဖြျောရညျကို နစေ့ဉျမှနျမှနျသောကျသုံးသှားခွငျး အားဖွငျ့ အထကျပါကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ရရှိစမေညျ့အပွငျ သငျ့ရဲ့အသားအရလေေးဟာလညျး ပိုးသားလို နူးညံ့ တောကျပလာစတေော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ပေါကျပေါကျ Tin Htet Htet Zaw
ပျားရည်မရှိသော ကမ္ဘာမှာ လူသားတွေသက်တမ်း ကလည်း (၄) နှစ်ထက် မပိုနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာကျော် ဂျာမန်လူမျိုး အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr.Albert Einstein က မိန့်ဆိုထားပါတယ်။ မှန် ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီ ညွတ်ဆုံး အစားအစာများထဲမှာ “ပျားရည်” လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို လူတိုင်းသိထား ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ၄င်းပျားရည်ကို ရေနွေးဖြူ ဖြင့်ရောသောက်ခြင်းက ဘယ်လိုကျန်းမာ ရေးအာနိသင်တွေ ရရှိနိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ သိသူတော့ နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။
သောက်သုံးရမည့် ဆေးညွှန်းပုံစံ က ဒီလိုပါ။ ကြက်သီးမွှေးညင်းခန့်ပူသော ရေနွေးဖြူ တစ်ဖန်ခွက် နှင့် ပျားရည်စစ်စစ် တစ်ဇွန်း (လက်ဘက်ရည်ဇွန်းအရွယ်) လိုအပ်ပါတယ်။
၄င်းတို့ကို ရောသမ သွားအောင် ဇွန်းဖြင့် နာနာမွှေပေးပါ။ ၄င်းဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် အောက်ပါကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(က) အဆုတ်ထဲရှိ အရိအရွဲတွေကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။
(ခ) ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးတက်မြင့်မားလာပြီး ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကျပ်နာ၊ အသက်ရှုလေပြွန်ပွ ရောဂါ၊ အအေးမိရောဂါ တို့ကို ကောင်းစွာ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
(ဂ) အစာချေလမ်းကြောင်းမှာ သွေးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက၊ ထိုအစာချေလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ကပ်ပါးပိုးများကိုလည်း သန့်စင်ပေးပါတယ်။
(ဃ) ဤဆေးဖျော်ရည်သောက်စမှာ ဗိုက်တွေခါးတွေ ဖောင်းလာကောင်း ဖောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မစိုးရိမ်ပါနှင့် ဆက် လက်၍သောက်ပေးပါ ဤဆေးရည်က မစင်အိမ်ကို ဖောင်းကြွစေခြင်းအားဖြင့် ပျော့နူးစေပြီး နောက်ဆုံးမှာ ၀မ်းနဲ့လေအဖြစ် သက်ဆင်း စေပါတယ်။
(င) အူသိမ်၊ အူမများအားလုံးကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေပြီး အဆိပ်အတောက်ပြေ စေပါတယ်။ (စ) အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ မှိုသတ်ဆေးရည်၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်၊ ဗက်တီးရီးယားသတ် ဆေးရည်အဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
(ဆ) ညဘက် ယမကာ အလွန်အကျွံသောက်သုံးခဲ့သူများဟာ နံက်အိပ်ယာထမှာ ပျားရည်ဆေးဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးပေးခြင်း ဖြင့် ခေါင်းမကြည် ခေါင်းကိုက် ဗိုက်အောင့်ဝေဒနာတွေ မခံစားရတော့ပါဘူး။
(ဇ) ပျားရည်ဟာ ကျောက်ကပ်ထဲရှိ အရည်များကို စုပ်ယူပစ်တာကြောင့် ညဘက်မကြာခဏ ဆီးထသွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင် စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညဘက် ဆီးခဏခဏသွားသူများအဖို့ ထိုဆေးဖျော်ရည်ကို ညနေခင်းပိုင်းမှာ သောက်ပေးခြင်း ဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို သိသိသာသာကောင်းကျိုး ပြုပါတယ်။
ပျားရည်သောက်ရန် အသင့်တော်ဆုံးအချိန် ဟာ ဘယ်အချိန် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ သင် ထင်ပါသလဲ ?
နံနက်စောစောအိပ်ယာထချိန်ဖြစ်တဲ့ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာမျှမရှိတဲ့အချိန်ဟာ ပျားရည်သောက်ရန် အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်) အစာနဲ့ဝေးချိန်ဖြစ်တဲ့ ညနေခင်းပိုင်း (ညစာမစားခင် နှစ်နာရီခန့်အလို)မှာလည်း သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နံနက်အိပ်ယာထ (သို့မဟုတ်) ညနေခင်းပိုင်း ဖြစ်တဲ့ မိမိအတွက်ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်မည့် အချိန်ကိုရွေး၍ တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်ကျနှုန်းဖြင့် ပျားရည်နဲ့ရေနွေး ဖျော်ရည်ကို အထက်ဖော်ပြပါဆေးညွှန်းအတိုင်းသောက်ပေးရမှာပါ။
၄င်းဖျော်ရည်ကို အကြာကြီး အအေးခံမထားသင့်ဘဲ ချက်ချင်းသောက်ပေး သင့်ပါပေတယ်။
ဤကဲ့သို့ ပျားရည်ဖျော်ရည်ကို နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်သုံးသွားခြင်း အားဖြင့် အထက်ပါကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေမည့်အပြင် သင့်ရဲ့အသားအရေလေးဟာလည်း ပိုးသားလို နူးညံ့ တောက်ပလာစေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ပေါက် Tin Htet Htet Zaw
၇ရကျသားသမီးဟောစာတမျး (10.Jun.2021 မှ 16.Jun.2021 အထိ)
ဒီနှဈခုကို တှဲ မသုံးမိစနေဲ့နျော